နှဈဆငျ့ထိုးနညျးနှငျ့ လကျလှညျ့ထိုးနညျး - Thaing Wizard
This entry was posted in Bando, Boxing, Kung Fu, Martial Arts Article, Pwe Kyaung and tagged ကှနျဖူး, ဆောငျးပါး, ပှဲကြောငျး, ဗနျတို, ဗနျးမျောသိနျးအောငျ, လကျဝှေ့ by athtet. Bookmark the permalink.
3 thoughts on “နှဈဆငျ့ထိုးနညျးနှငျ့ လကျလှညျ့ထိုးနညျး”
ko win on July 12, 2013 at 6:14 pm said:
မည်သည့်ပညာရပ်မဆို ဆုံးခန်းတိုင်သည် ဆိုတာ မရှိသည်ကို နားလည်ပါသည်။သို့သော် အဆင့်အမြင့်ဆုံး သိုင်းသမားတစ်ယောက် အနေဖြင့် (အများနှင့်တစ်ယောက်)
ရင်ဆိုင်ရာတွင် လူဦးရေဘယ်လောက်များများ ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်း ရှိသည်ကို (အတိအကျမဟုတ်တောင် ခန့်မှန်း အဖြေအား) သိချင်ပါသည် ဆရာ။
Aung Thu Htet on July 12, 2013 at 9:23 pm said:
ဒါတော့ ပျှမ်းမျှတွက်ပြောလို့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူး ခင်ဗျ။ တိုက်ခိုက်နိုင်မှုစွမ်းရည် ဆိုတာ တိုက်ခိုက်သူနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ပညာရပ်ရဲ့အဆင့် ဆိုတာကလည်း ပညတ်ချက်တွေပါ။ ပညာရပ်ရဲ့ တန်ဖိုးဆိုတာ အဲ့ဒီပညာရှင်ရဲ့ အရည်ချင်းပါပဲ။ အရည်အချင်းဆိုတာကို တစ်နည်းပြောရ ရင် လေ့ကျင့်မှုရဲ့ ရလဒ်ပါပဲ ခင်ဗျာ။ လေ့ကျင့်မှု အားကောင်းလာတဲ့အခါ ယုံကြည်မှုရှိလာပီး ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားလာပါမယ် ခင်ဗျာ။
တစ်ခု ပြောရဦးမယ်ဗျ… ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းကို ပြောရရင်တော့ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိတဲ့ လူဟာ အယောက်(၁၀၀)လာလည်း မမှုပါဘူး။ ဒါက ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်မှုစွမ်းရည်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါ။ တစ်နည်း ပြောရရင် ယှဉ်ပြိုင်ရဲတဲ့ သတ္တိပေါ့ဗျာ။
အနိုင်တိုက်ဖို့… အကျချဖို့ ဆိုတာကတော့ ခုနပြောတဲ့ သတ္တိနဲ့ မဆိုင်တော့ဘူးဗျ။ အများနဲ့ တစ်ယောက် ဖြစ်နေမယ် အဆမတန်အင်အားကွာနေမယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံးကို အမှောက်ဆော်ခဲ့ဖို့က စူပါမန်းပဲ လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ။
ko win on July 13, 2013 at 10:35 am said:
အရွှမ်းဖောက်ပြီး သိချင်တာကို ဖြေပေးသည့် အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဆရာ။